Inona no atao hoe Corel Draw: inona izany sy ny fepetra takiana | Famoronana an-tserasera
Hatreto dia mahafantatra programa maro manamora ny asa famolavolana na layout isika. Vitsy amintsika no mahafantatra ireo programa maro izay novolavolaina sy noforonina amin'izao fotoana izao mba hanamora ny asa ho antsika. Saingy zava-dehibe foana ny mandinika ny sasany amin'izy ireo satria tena zava-dehibe izy ireo raha tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny famolavolana sary.
Amin'ity lahatsoratra ity dia tonga hiresaka aminao momba ny Corel Draw izahay, raha tsy hainao izany dia ho fitaovana na logiciel vaovao ho anao izany araka ny tianao hiantsoana azy. Mijanòna miaraka aminay ary miaraha aminay amin'ity torolalana vaovao ity izay novolavolainay tsy mihoatra na latsaka ho anao.
1 Inona no atao hoe CorelDraw
1.1 ahoana no nahatonga izany
1.2 asa fototra
3 Fepetra takiana
CorelDraw, no tena fampiharana ny suite ny programa CorelDRAW Graphics Suite natolotry ny Corel Corporation ary natao hifanaraka amin'ny filana maro, toy ny fanaovana sary, fandrafetana pejy ho an'ny fanontam-pirinty sy ny famoahana tranonkala, tafiditra ao anatin'ny fandaharana iray avokoa. Izy io dia programa mitazona endri-javatra mitovy amin'ny Adobe InDesign Photoshop na Illustrator.
Ity dia rindrambaiko tena tsara natao ho an'ireo tia ny famolavolana sary. Ity programa ity dia ahafahanao manamboatra endrika amin'ny fomba matihanina, manana fitaovana tena mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa. Ny iray amin'ireo tombony amin'ny CorelDraw dia ny mpampiasa afaka misafidy amin'ny dikan-teny samihafa ianao, Araka ny voalaza etsy ambony dia misy dikan-teny ho an'ny matihanina sy dikan-teny tsy matihanina hafa. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manitsy amin'ny ambaratonga anananao, izay mahatonga azy io ho manintona kokoa sy mora kokoa ny mivezivezy amin'izany.
Ny dikan-teny farany indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia Corel Draw x9, izy no mpandimby an'i Corel Draw x8, mitondra fitaovana vaovao, interface tsara, izay tena mora adika ho an'ny mpampiasa, izay ahafahanao manao drafitra. amin'ny fomba matihanina.araka ny fahaizanao mamorona.
ahoana no nahatonga izany
Loharano: The Good Dance
CorelDRAW dia nandray ny tontolon'ny sary hosodoko tamin'ny tafio-drivotra tamin'ny taona 1989, nampiditra sary feno sary vetaveta feno loko sy fandaharana, voalohany amin'ny karazany. Roa taona taty aoriana, nanova ny indostria indray i Corel, nampiditra ny sariitatra voalohany amin'ny iray miaraka amin'ny version 3, izay natambatra ny sary vector, fandrafetana pejy, fanovana sary ary maro hafa ao anaty fonosana iray.
Roapolo taona taty aoriana, nanohy ny fanavaozana ny CorelDRAW Graphics Suite X4, mampiditra fandrafetana lahatsoratra mivantana vaovao, sosona misaraka isaky ny pejy, ary fampidirana amin'ny serivisy ahafahana miara-miasa amin'ny fotoana tena izy. Ity dikan-teny ity dia natao ho an'ny rafitra fiasan'ny Windows farany, manohy ny fomban-drazany amin'ny maha-fitaovana sary matihanina ho an'ny PC.
Corel Draw dia fitaovana miasa indrindra amin'ny vectors. Tena ilaina ny Vectors raha izay tianao mamorona logos, kisary, bokikely, karatra fandraharahana sns.
Anisan'ireo fiasa izay ananan'i Corel Draw, dia misongadina fa manana fomba fijery, fanaraha-maso ary nodes nohatsaraina kokoa izy, manana fitaovana LiveSketch sy sliders interactive ihany koa, izany hoe, ny programa dia manana fifandraisana eo amin'ny sehatra misy azy.
Izy io koa dia manana fitaovana toy ny gaussian blur, fitaovana kopia, fanasitranana clone, multi-monitor, mpitantana endri-tsoratra, fanafarana toeram-piasana, fanatsarana penina mahery sns.
Ny safidy: Mamela anao hiasa amin'ny famolavolana, izany hoe mihodina sy mitongilana tsy manova ny habeny.
Fanovana maimaim-poana: Ahafahana manova zavatra amin'ny alàlan'ny refy malalaka, fihodinana maimaim-poana ary fitongilana maimaim-poana.
Safidy Freehand: Safidy zavatra Freehand.
Fitaovana fanovana endrika: Toy ny Ideal Smooth hanatsarana ny endrik'ireo zavatra amin'ny alàlan'ny fihenan'ny node sy ny fanesorana ny sisiny, ny endrika izay manampy amin'ny fanitsiana ny endrik'ilay zavatra sy ny spiral manampy amin'ny fanaovana effets manokana amin'ny famolavolana zavatra.
Manjavozavo: Manaova endrika singa iray amin'ny fifandraisana amin'ny fanitarana mandrafitra ity na mamorona indents manodidina ny drafitra.
Izy io dia programa vector, izay manamora ny fanamboarana endrika toy ny pirinty, sokitra ary satria miorina amin'ny vector dia azonao atao ny mampitombo ny endrikao ary tsy hahavery ny kalitaony.
Misy ny kinova amin'ny teny espaniola, raha ny orinasa hafa mamolavola rindrambaiko kosa tsy dia miraharaha loatra ny tsena espaniola na latinina.
logiciel izay manohana dingana maro pejy, izany hoe mitazona ny fifandanjana eo amin'ny lafiny roa amin'ny pejy.
Ankoatry ny fametrahana azy amin'ny PC dia azo apetraka amin'ny MAC izy, toy ny amin'ny rafitra miasa toa ny Windows sy Linux.
Afaka mandamina rakitra Office (Microsoft) izy io.
Tombony azo amin'ny fiasa amina endrika hafa novolavolaina tamina fonosana hafa toa ny ohatra "mpanao sary".
Izy io dia manohana ny famindrana sary miaraka amin'ny fanitarana TIF, izay tsy ataon'ny programa hafa.
Izy io dia manana fitaovana hanovana haingana, izany hoe tsy manao tsindry marobe.
Azonao atao ny mahita fanohanana amin'ny tranokala raha misy ny olana amin'ny fotoana fampandrosoana.
Azonao atao ny manova sary toy ny miaraka amin'ny Photo-Paint, rindrankajy fanontana mifototra amin'ny sary bitwise.
Mila habaka kapila mafy be izy io.
Rindrambaiko izay avo dia avo ny vidiny.
mandany fitadidiana betsaka rehefa manodina sary.
Tsy maintsy manana solosaina izay efa mandroso ny firafitry ianao vao afaka manodina ny sary
Soso-kevitra ny hametrahana karatra horonantsary mifanaraka amin'ny OpenCL 1.2
Nametraka processeur EPYC AMD Ryzen 3/5/9/threadripper
Manana toerana malalaka 4 GB amin'ny kapila
Ny efijery izay manana vahaolana 1280 x 720 amin'ny 100% (96 dpi)
Ny efijery dia tsy maintsy ho multi-mikasika, na mitovy toetra
Rafitra NET 4.7.2
Raha dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-CorelDraw dia tsy maintsy misy izany manana kapila DVD, satria ny fampidinana 900 MB avy amin'ny DVD.
Ilaina ny manana fifandraisana Internet amin'ny fametrahana sy ny fanamarinana.
Tsy maintsy manana processeur multi-core Intel (cores lojika 4 na mihoatra) izay manohana 64-bit
Fahatsiarovana RAM 4 GB, atolotra anao ho lehibe mihoatra ny 4 ny fitadidiana
Ny efijery dia tsy maintsy manana 1280 x 800 vahaolana amin'ny toe-javatra sasany dia soso-kevitra ny famahana ny 1920 x 1080
Asio karatra horonan-tsary mifandraika amin'ny OpenCl 1.2
Manana toerana malalaka kapila mafy 4GB.
Takelaka sary na totozy.
Mba hanatanterahana ny fametrahana dia tokony hanana fifandraisana Internet ianao.
Tamin'ny 1989 dia namoaka ny kinova 1.0 izy ireo natao indrindra ho an'ny Microsoft Windows 286, satria dikan-teny voalohany raha oharina amin'ny fenitra ankehitriny. Fanavaozana ny tontolon'ny famolavolana sary.
Nivoaka tamin'ny 1990 ny version 1.11: Amin'ity dikan-teny ity dia nampidirina ny sary amin'ny lafiny roa sy telo.
1991 CorelDraw 2 dia navoaka miaraka amin'ny asa fanontana, izay ny fahaizany dia mampifangaro ny lahatsoratra sy ny singa sary ary afaka manonta azy ireo, dia nivoaka tamin'ny fitaovana mety hiharatsy sy hampifangaro singa amin'ny endriny.
CorelDRAW 12: Version navoaka tamin'ny 2004, amin'ity dikan-teny ity dia nohatsaraina sy nohamafisina ny rafitra anatiny, izany no nahatonga azy ho programa mahay, matanjaka ary voalanjalanja.
CorelDRAW X3: Amin'ity dikan-teny ity misy singa vector vaovao nampidirina "Corel PowerTRACE", ny asany hanovana sari-tany manokana amin'ny sary vetaveta, dikan-teny navoaka tamin'ny 2007.
Corel X4: Version nampidirinao ny firafitry ny lahatsoratra izay ho hita teo aloha, ny toetra na toetran'ny lahatsoratra alohan'ny hampiharana azy amin'ny lahatsoratra iray, ny dikan-teny amin'ny taona 2008 dia mandeha eny an-tsena.
DRAW X5: Ny ankamaroan'ity dikan-teny ity dia namboarina ho an'ny rafitra fiasan'ny Windows 7, nohamafisina ny famolavolana drafitra, nanatsara ny fizotran'ny asa, ary natao tsara ihany koa izy io mba hiarahana miasa amin'ny processeur multi-core. Tamin'ny taona 2010 no navoaka ity dikan-teny ity.
CorelDRAW X6: Amin'ity dikan-teny ity miampy motera typografika mahery, koa singa manana fiasa lehibe (spiral, manova, mametra, manintona), dikan-teny napetraka eny an-tsena tamin'ny taona 2012.
CorelDRAW X7: Nohatsaraina ny fiasa, fitaovana vaovao ary rafitra vaovao no noforonina.
DRAW 2017: Miaraka amin'ity dikan-teny ity, misy fitaovana vaovao antsoina hoe LiveSketch, izay mampiasa ny fahombiazan'ny tambajotra neural. Apetraka amin'ny tsena amin'ny 2017.
CorelDRAW 2018: Misy singa aloka miampy izay ahafahanao manampy aloka amin'ny zavatra. Version mandeha eny an-tsena amin'ny Aprily 2018.
CorelDRAW 2019: Amin'ity dikan-teny ity dia ampidirina ny endrika matematika. Mandeha an-tsena amin'ny martsa 2019 izy io.
Raha programa tsara hamolavolana ny tadiavinao ary tsy maharesy lahatra anao ny safidin'i Adobe, dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidy tsara indrindra azonao ampidirina ao amin'ny lisitrao ny Corel Draw. Izy io koa dia manana dikan-teny samihafa, izay samy manome fanatsarana ny programa izay manamora kokoa ny asa. Izy io no programa tsara indrindra satria mety amin'ny rafitra toa an'i Windows sy Mac ihany koa, izany dia mamela ny tsy hisian'ny olana amin'ny rafitra.
Raha toa ka tsy nahazo fahitana tsara momba ity programa ity ianao dia afaka miantehitra amin'ny programa faharoa toy ny Canva, Photoshop. Inskape, Mpamorona Affinity na Marika Tailor. Tonga izao ny fotoana hanandramanao misintona sy mametraka izany amin'ny PC-nao, ary avelao ny tenanao ho very amin'ny tsirairay amin'ireo fitaovana sy safidy misy azy, ary raha manana fisalasalana bebe kokoa momba izany ianao, mamaha azy ireo mora ho anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe CorelDraw